နတ်​ပြည်​မှာ.တည်​ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲလား… – Tameelay
လာမခေါ်နဲ့ ! အဲတာခေါ်ခိုင်းတာ မခေါ်ပဲနေကြည့် သေအောင်စိတ်ဆိုးတယ် အေးးးရတယ်လေ! အဲတာ မရဘူးးး ကြည့်နေ ငါပြဿ နာ ရှာပြမယ် အဲ့လို ပြီးတာပဲ! အဲ့တာ မပြီးဘူး မကျေနပ်လို့ပြောတာ ခဏနေ သူပြန်ရွဲ့ တော့မှာ ဘာတစ်ခွန်းမှလာမပြောနဲ့ ! အဲ့တာကောက်သွားတာ အမြှုပ်ထွက်အောင် သွားရှင်းပြ …
ဒီည ဒီစာကို မဖြစ်မနေဖတ်လိုက်ပါ
သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ငွေ ရှစ်သောင်းခြောက်ထောင့်လေးရာ(၈၆, ၄၀၀) ရှိတယ်။လူတစ်ယောက်ကသင့်ဆီက ၁၀၀တန်တရွက် ခိုးသွားတယ်။ဒါဆိုရင် သင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးနဲ့အဲဒီလူကို လိုက်ရှာဖမ်းဖို့အတွက်သင့်ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံ (၈၆, ၃၀၀)လုံးကို ပုံပြီးသုံးမလား။ ဒါမှမဟုတ်မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နေမလား။အဖြေ ကတော့ ရှင်းပါတယ်။စိတ်ပြေ လက်ပျောက်ပဲ နေမှာပေါ့။၁၀၀လောက်လျော့သွားတာ အတွက်ဘာကြောင့် မအိပ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေမလဲ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒါဆို သင်တို့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့တနေ့တာမှာစက္ကန့်ပေါင်း …